SHAN boqol oo sanadood kaddib sii sheegiddii Daanyeel, Jibriil malaaʼigtii Ilaahay baa u muuqday Maryan gabadh bikrad ah oo ahayd dhashii Boqor Daaʼuud. Jibriil baa Maryan ku yiri: “Nabad, adigoo nimcaysan, Rabbiga ayaa kula jira.” (Luukos 1:28) Haddaba Maryan way naxday. Jibriil salaantiisa muxuu ula jeeday?
Jibriil Maryan buu ku yiri Masiixa bay ummuli doontaa
Jibriil wuxuu ku yiri: “Ha baqin, Maryamay, waayo, nimco ayaad Ilaah ka heshay. Bal eeg, waad uuraysan doontaa, oo wiil baad umuli doontaa, magiciisana waxaad u bixin doontaa Ciise . . . Rabbiga Ilaaha ahuna wuxuu siin doonaa carshigii awowgiis Daaʼuud . . . boqornimadiisuna ma idlaan doonto.” (Luukos 1:30-33) Waa war wanaagsan! Maryan baa Masiixa ummuli doonta, ‘farcankii’ ay weligood sugayeen.
Sanadkii ku xigay, Ciise Beytlaxam buu ku dhashay. Habeenkaas malaaʼig baa adhijirro u sheegay: “Ogaada, waxaan idiin keenay war wanaagsan oo leh farxad weyn . . . Waayo, maanta waxaa magaalada Daaʼuud idiinku dhashay Badbaadiye oo ah Masiixa.” (Luukos 2:10, 11) Kaddibna reerkii Ciise waxay u guureen Naasared, magaaladaa buu ku koray.
Sanadkii 29 ee miilaadiyada Ciise markuu ahaa “qiyaas soddon jir” buu bilaabay inuu Ilaahay u adeego uuna noqdo nebigiisii taasoo ahayd isla sanadkii la sii qoray inuu Masiixu yimaaddo. (Luukos 3:23) Dad badan baa ogaaday inuu Ilaahay soo diray. Waxay yiraahdeen: “Nebi weyn ayaa dhexdeenna ka kacay.” (Luukos 7:16, 17) Laakiinse muxuu Ciise bari jiray dadka?
Ciise wuxuu dadka bari jiray inay Ilaahay jeclaadaan ayna caabudaan: Wuxuu sheegay: “Rabbiga Ilaaheenna ah waa Rabbi keliya. Waa inaad Rabbiga Ilaahaaga ah ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan, iyo naftaada oo dhan, iyo caqligaaga oo dhan, iyo xooggaaga oo dhan.” (Markos 12:29, 30) Wuxuuna ku yiri: “Waa inaad caabuddo Rabbiga Ilaahaaga ah oo waa inaad isagoo keliya u adeegto.”—Luukos 4:8.
Ciise wuxuu ku dardaarmay inay dadku is jeclaadaan: Ciise wuxuu yiri: “Waa inaad deriskaaga u jeclaataa sida naftaada.” (Markos 12:31) Wuxuuna yiri: “Wax kasta oo aad doonaysaan in laydinku sameeyo, idinkuna sidaas oo kale u sameeya; waayo, kanu waa sharcigii iyo nebiyadii.”—Matayos 7:12.
Aad iyo aad buu Ciise ugu dadaali jiray inuu dadka kala hadlo Boqortooyada Ilaahay: Ciise wuxuu yiri: “Waa inaan . . . injiilka boqortooyada Ilaah ku wacdiyo, waayo, sidaa darteeda waa la ii soo diray.” (Luukos 4:43) Maxay Boqortooyada Ilaahay muhim u tahay?
Wuxuu Qorniinka Quduuska ah ina baraa Boqortooyada Ilaahay inay tahay mid samada ku taalla oo adduunkoo dhan maammuli doonta. Ciise Masiix waa Boqorkii uu Ilaahay u doortay. Nebi Daanyeel wuxuu samada ka sii arkay inuu Ilaahay Masiixa siin doono “dowladnimo iyo ammaan iyo boqortooyo.” (Daanyeel 7:14) Boqortooyadaas waxay ka dhigi doontaa dunida oo dhan Janno, waxayna ku abaalgudi doontaa Ilaahay addoommadiisa nolol aan weligeed dhammaanayn. War wanaagsan miyuunan ahayn?
Sidee baad uga jawaabi lahayd?
Muxuu Jibriil malaaʼigtii Ilaahay Maryan ku yiri?
Wax sii sheegiddee baa sanadka 29 ee miilaadiyada rumooday?
Muxuu Ciise bari jiray dadka?
Maxay tahay Boqortooyada Ilaahay, maxayna fulin doontaa?
Ciise Masiix yuu ahaa?
“Masiix” wuxuu ka dhigan yahay kii subkanaa oo ah mid uu Ilaahay madaxnimo u doortay. Ilaahay baa Ciise Masiix abuuray. Si cajaaʼib leh buu Ilaahay ku sababay inay Maryan aabbe laʼaan Ciise u dhasho.
Maxay dad fara badan Ciise u aammineen? Bal eeg sababahan:
Waxbariddiisa waxay ka timaadday Qorniinka Quduuska ah.
Waxbariddiisa iyo masaalladiisa waxay soo jiideen dadka runta iyo caddaaladda jecel.
Awoodda Ilaahay daraaddeed buu Ciise cajaaʼibbo badan u sameyn jiray.
Wax sii sheegid fara badan oo ku qornaa Qorniinka Quduuska ah buu oofiyay.
Wadaag Wadaag Imanshadii Masiixa
Masiixii Baa Imaadday